Gịnị Bụ Mmehie Na-enweghị Mgbaghara? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mmehie na-enweghị mgbaghara bụ ihe ọjọọ ọ bụla mmadụ na-eme ma na-ele ya anya otú ga-eme ka Chineke ghara ịgbaghara ya. Olee otú mmadụ nwere ike isi mee ụdị mmehie ahụ?
Chineke na-agbaghara ndị chegharịrị ná mmehie ha, na-erube isi n’iwu ya ma nwee okwukwe na Jizọs Kraịst. (Ọrụ Ndịozi 3:​19, 20) Ma, mmadụ nwere ike imegide mmehie, mmehie erie ya isi nke na ọ gaghị agbanwelizi àgwà ya. Baịbụl kwuru na ndị dị́ otú ahụ nwere “ajọ obi” nke ‘ike dị aghụghọ nke mmehie mere ka ọ kpọchie.’ (Ndị Hibru 3:​12, 13) Obi onye ahụ adịghịzi ka ụrọ e nwere ike ịkpụgharị akpụgharị. Kama, ọ dịzi ka nkume. Onye ahụ jizi obi ya niile na-emegide Chineke. (Aịzaya 45:9) O nweghị ihe a ga-eji maka ya gbaghara onye ahụ. Mmehie onye dị́ otú ahụ bụ mmehie nke a na-agaghị agbagharali agbaghara.​—Ndị Hibru 10:26, 27.
Ụfọdụ ndị ndú okpukpe ndị Juu n’oge Jizọs mere mmehie na-enweghị mgbaghara. Ha ma na ọ bụ mmụọ nsọ Chineke ka Jizọs ji na-arụ ọrụ ebube ndị ọ rụrụ, ma ha kwuru na ọ bụ ike Ekwensu ka Jizọs ji arụ ọrụ ebube ndị ahụ.​—Mak 3:​22, 28-​30.
Mmehie ndị e nwere ike ịgbaghara mmadụ
Ikwulu mmadụ na-amaghị ama. E nwere mgbe Pọl onyeozi bụ onye nkwulu, ma o mechara kwuo, sị: “E meere m ebere, n’ihi na amaghị m ihe mgbe ahụ, emekwara m ya n’ihi enweghị okwukwe.”​—1 Timoti 1:​13.
Ịkwa iko. Baịbụl kwuru banyere ụfọdụ ndị kwara iko ma mechaa gbanwee, Chineke agbagharakwa ha.​—1 Ndị Kọrịnt 6:​9-​11.
“È meela m mmehie na-enweghị mgbaghara?”
Ọ bụrụ na ihe i mere n’oge gara aga wutere gị nke ukwuu, ya abụrụkwa na ị chọrọ ịgbanwe n’eziokwu, ọ pụtara na i mebeghị mmehie na-enweghị mgbaghara. Ọ bụrụhaala na obi mmadụ akpọchibeghị, Chineke ga-agbagharali ya mmehie ọ bụla o mere, ọ bụrụogdị na o mere ya ugboro ugboro.—Aịzaya 1:18.
Ụfọdụ na-eche na ha emeela mmehie na-enweghị mgbaghara n’ihi na obi ha na-ama ha ikpe maka ihe ha mere. Ma, Baịbụl na-akụzi na anyị ekwesịghị ịna-atụkwasị obi anyị obi mgbe niile. (Jeremaya 17:9) Chineke enyeghị anyị ikike ikpe ma onwe anyị ma ndị ọzọ ikpe. (Ndị Rom 14:​4, 12) O nwere ike ịgbaghara anyị ọ bụrụgodị na obi anyị ka na-ama anyị ikpe.​—1 Jọn 3:​19, 20.
Judas Iskarịọt ò mere mmehie na-enweghị mgbaghara?
Ee. Anyaukwu mere ka o zuru ego a tụkọtara maka ofufe Chineke. O medịrị ka à ga-asị na ọ na-eche banyere ndị ogbenye. Ma ihe bụ mkpa ya bụ inwetakwu ego ọ ga-ezu. (Jọn 12:​4-8) Ozugbo ime ihe ọjọọ riri Judas isi, ọ raara Jizọs nye maka mkpụrụ ego ọlaọcha iri atọ. Jizọs ma na Judas agaghị eji obi ya niile chegharịa, ọ bụ ya mere o ji kpọọ ya “nwa mbibi ahụ.” (Jọn 17:12) Ọ pụtara na mgbe Judas nwụrụ, o nweghị olileanya mbilite n’ọnwụ.​—Mak 14:21.
Judas echegharịghị ná mmehie o mere. O kwupụtaghịrị Chineke mmehie ya, kama ọ bụ ndị ndú okpukpe ya na ha gbara izu ka o kwupụtaara ihe o mere.​—Matiu 27:​3-5; 2 Ndị Kọrịnt 7:​10.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Mmehie Na-enweghị Mgbaghara?
ijwbq isiokwu 101
Gịnị Ka Ịgbaghara Mmadụ Pụtara?